Namoaka taranja vaovao mikasika ny fitondrana jadon’i Marcos ny Oniversiten’ny Filipina ho fanoherana ny fanitsiana ara-tantara · Global Voices teny Malagasy
Namoaka taranja vaovao mikasika ny fitondrana jadon'i Marcos ny Oniversiten'ny Filipina ho fanoherana ny fanitsiana ara-tantara
33 taona taorian'ny nionganan'i Marcos no nanolorana ilay taranja
Voadika ny 28 Febroary 2021 4:41 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, English
Ireo Solontenan'ny Fakiolte nandritry ny famoahana ilay taranja ny 18 septambra 2019. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Taranja iray vaovao momba ny fanabeazam-pirenena (GE) izay hiresahana ireo taona nanjombona tamin'ny fitondrana miaramila tao Filipina nandritra ny fitondrana jadon'i Ferdinand Marcos no hampianarina ao amin'ny campus Diliman an'ny Oniersiten'i Filipina (UP), ilay Oniversitem-panjakana voalohany ao amin'ny firenena.
Horesahan'ny Philippines Studies 21 (PS 21) ny traikefa nanan-tantara niainana ny famoretana sy fanoherana nisy teo ambanin'ny Lalàna Miaramila ho fomba iray hitsipahana ny andrana nataon'ireo mpiara-miasa politika tamin'ilay mpanao didy jadona taloha, Marcos, anisan'izany ny governemanta vao nandao ny toerany teo ambany fitarihan'i Rodrigo Duterte, mba hanaronana ireo heloka, kolikoly ary ireo fanitsahana ny zon'olombelona nandritra izany fitondrana miaramila izany.
Hiompana amin'ny fiteny, ny kolontsaina ary ny literatiora avy any amin'ny vanimpotoanan'ny Lalàna Miaramila izany taranja vaovao izany. PS 21 no anaran'ilay taranja izay nalaina avy tamin'ny datin'ny andro nananmbaràna ny Lalàna Miaramila ny faha 21 Septambra 1972. Avy eo, napetraky ny Filoha Ferdinand Marcos ny didy jadona nandritry ny 14 taona mandra-pahatongan'ny nanonganan'ny vahoaka azy tamin'ilay fitroaram-bahoaka tao EDSA ny taona 1986.
Niteraka resabe ity taranja vaovao ity satria nitaraina ry zareo Marcoses fa mety “handeha ila” hamelezana ny fianakavian'izy ireo izany raha niantsoantso kosa ny tafika mitam-piadiana fa mety ampiasaina ho fitaovana fandraisana olona ho an'ny “mpikomy kaominista” izany.
Fametrahana ny PS 21
Efa nomanina nanomboka ny taona 2014 ny PS 21 fony izy sambany natolotr'ireo profesora tao amin'ny Departemantan'ny Oniversiten'i Filipina misahana ny teny Filipiàna sy Literatiora ao Filipina (DFPP).
Saingy nihanahazo vahana tamin'ny faramparan'ny taona 2018 ireo ezaka natao hampiorenana ity taranja ity rehefa nivoaka tamin'ny haino vaky jery ilay olan'ny filohan'ny UP Danilo Concepcion izay nandihy niaraka tamin'ny loholona Imee Marcos, zanaka vavimatoan'ilay mpanao jadona efa nodimandry, tamina asa sôsialy iray tao amin'ny oniversite.
Namoaka fanambaràna izay mitaky ezaka mafy kokoa hampianarana ny vahoaka ny zava-mahatsiravina nateraky ny fitondrana jadon'i Marco ny filankevitry ny oniversite UP Diliman, anisan'izany ny famoronana taranja fanampiny ao amin'ny oniversite.
Rehefa avy nandalo dingana henjana maromaro tao anatin'ny antanan-tohatra akademika ho fankatoavana ireo taranja ny PS 21 dia nekena tamin'ny alàlan'ny filankevitry ny oniversite UP Diliman ny volana septambra 2019 lasa teo. Navoaka tanaty aterineto ilay programa natolotra.
Nilaza ilay loholona Imee Marcos raha nanontanian'ireo haino aman-jery fanazavana momba io taranja io fa nangatahany ny mba hampidirana ny tantaran'ny fianakaviany anatin'io lesona io. Nanome toky azy ireo solontenan'ny PS 21 fa tafiditra ao anatin'io taranja io tokoa ireo kabary sy asa soratr'ilay mpanao didy jadona efa nodimandry, nanomezany rariny ny fitondràna miaramila.
Nilaza i Salvador Panelo, mpitondra tenin'ny filoham-pirenena , izay efa mpisolovava an'ireo Marcoses tamin'ilay raharaha momba ny haren'izy ireo azo tamin'ny tsy rariny, fa hevitra tsara ny fametrahana ity taranja ity : “Tokony ho fantatra sy hianaran'ny mpianatra tsirairay avy ireo taranja rehetra mifandraika amin'ny fitantanana.”
Lohahevitra mampifanipaka io resaka tamin'ny andron'ny Lalana Miaramila io amin'izao fotoana izao ao Filipina. Amin'ny lafiny iray, mbola maro ireo Filipiana no mikatsaka hatrany ny hijerena ireo olona voahitsakitsaka ny zony—ireo an'arivony izay nogadraina, nampijaliana, novonoina, ary tsy hita popoka— nandritry ny fitondran'i Marcos.
Voatonona , eny na avy amin'ireo mpahay toekarena mahazatra aza, ilay programam-pampandrosoan'i Marcos miompana amin'ny fitrosàna sy ny kolikoly faobe ahazoan'ireo fianakaviany sy ny namany tombony izay niteraka Etsy ankilany, nilaza ireo mafana fo mpiaro ny zon'olombelona fa ny tsy fahombiazam-pitantanan'ireo mpitondra talohan'i Marcos nanameloka ny havana sy naman'ilay mpanao jadona no nahatonga ny fiverenan-dry zareo Marcos sy ny tariny teo amin'ny fitondrana. Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, zanaka lahin'ilay mpanao didy jadona sady mitovy anarana aminy, no saika nahazo ny toeran'nyu filoha lefitra nandritry ny fifidianana tamin'ny 2016. Amin'izao fotoana izao, manana toerana ao amin'ny Antenimieran-doholona ny anabaviny Imee Marcos.
Tsy nihambahamba ny filoha Duterte, izay naneho hevitra ampahibemaso ny fiderany an'i Marcos, sy ireo mpiasam-panjakana niara-niasa taminy raha niantso ny vahoaka “hiàla” amin'ireo zava-maharikorikon'ny fitondràna didy jadona, raha toa ka niantso izany taona izany ho “Fotoana volamena” teo amin'ny tantaran'i Filipina kosa ireo mpiara-miasa aminy.
Lahatsary fampielezankevitra iray navoakan'ny Philippine News Agency (PNA)- Masoivohom-Baovao ao Filipina, ambany fitantanan'ny fanjakana izay manohitra ireo fikambanana mpikatroka ho toy hetsika ataon'ny fanjakàna hanoherana ny fanonganam-panjakana, ohatra, no manindrahindra ny fotoam-pitondran'i Marcos ho teboka faratampony iray ho an'ny toekaren'ny firenena.
Ankoatra izay, ny 18 Novambra 2016 dia nomen'i Duterte alàlana ny handevenana ny vatan'ilay mpanao didy jadona ao amin'ny Libingan ng mga Bayani (fasan'ny mahery fo) , ka nahatonga rikoriko sy hetsi-panoherana nanerana ny firenena.
Ireo mpianatra nihaino, raha ireo mpanohana kosa manazava ny antom-pisiany sy ny votoatin'ilay taranja Ps 21 nandritry ny famoahana izany ofisialy ny 18 Septambra 2019 lasa teo. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Mampiomehy fa efa tratran'ny famoretana toy ny tamin'ny andron'ny Marcos sahady ilay taranja miresaka momba ny fanararaotana nandritry ilay didy jadona. Mbola tsy nampianarina akory ilay PS21 kanefa efa jeren'ny governemanta Duterte akaiky sy ny miaramila mitampiadiany sahady .
Vao tsy ela no nanameloka ny miaramila mitampiadiana Filipiana ny tambazotra UP Rises Against Tyranny and Dictatorship (UPRISE) (Oniversiten'i Filipipna manohitra ny Tsy Refesimandidy syny Jadona) tamin'ny fanasoketàna iay taranja vaovao ho toy ny fitaovana iray entina handraisana “mpikomy kaominista”, nandritry ny koaferansa iray tao amin'ny faritry ny Oniversite Cauayan, ao amin'ny fanjakàn'i Isabela.
Amidst nationwide crackdown, state forces hold third “peace forum” inside campus to warn students against joining progressive groups Kabataan, ACT, Anakbayan, LFS. UPD's Philippine Studies 21 GE on Martial Law was also tagged as tool for recruitment. pic.twitter.com/vgqHxOvOTz
— Sky Lukewalker (@sio_mai_rai_) November 11, 2019
Anivon'ny famoretana nanerana ny firenena, mitazona ny “toerana maha mpampandry fahalemana” fahatelo azy ny tafika ao amin'ny Faritry ny Oniversite mba hampitandremana ny mpianatra tsy hanatevina ireo vondrona andalam-pivelarana: Kabataan, ACT, Anakbayan, LFS. Nolazaina fa fitaovana handraisana mpikambana ihany koa ny Taranja 21 GE ao amin'ny UPD momba ny Lalàna Miaramila.
— Sky Lukewalker (@sio_mai_rai_) 11 Novambra 2019
Nilaza ny UPRISE fa mifanaraka amin'ny Didim-pitondràna faha-70 napetraky ny Filoha Duterte ilay fanasoketàna izay mametra fomba fjery iray “firenena iray manontolo” izay mandrindra ireo hetsika rehetra ataon'ireo mavoiboho sivily ho toy ny ampahany amin'ny ezaky ny miaramila hanoherana ny fanonganam-panjakana.
Natao ity fanolorana ity mba hifanaraka amin'ilay didim-pitondràna faha-70, natolotra ho toy ny lahateny hiantohana ny fahatoniana sy fiarovana ny mpianatra, saingy amin'ny ankapobeny dia fampielezankevitra goavana fanasoketàna sy fanakianana ny fanabeazam-pirenena ary neken'ireo sekoly sy ireo fikambanana araka ny lalàna izany.
Ny senatera Bato dela Rosa, izay filohan'ny polisy teo aloha, tena mpanatanteraka ny “Ady amin'ny zava-mahadomelina” nataon'i Duterte, no mitarika ny ady masina “Vonjeo ny mpianatra” tsy ho tratry ny “fidiran'ny kaominista” any an-tsekoly sy amin'ny oniversite.
Ny tatitra faha-10 navoakany ho an'ny Komitin'ny Antenimierandoholona no manosoka hevitra ho an'ireo mpitantana ny sekoly mba hamoritra ny “radicalization” (fanaovana hiringiriny) amin'ny fampitomboana ny fisian'ny polisy sy ny miaramila any amin'ny faritry ny Oniversite, ny fanarahamaso matetika ny fandaharam-pianarana akademika, ny fijerena akaiky ireo hetsika any an-tsekoly, hatramin'ny fametrahana fitoriana atao amin'ireo mpampianatra.
Ny 20 Aogositra 2019, nanao hetsi-panoherana ireo mpianatra, ny fakiolte, ary ireo mpiasa maro, teo anoloan'ilay toerana manantantara Palma Hall an'ny Oniversite Diliman ao Filipina ho fanoherana ny mety fidiran'ny miaramila sy ny polisy ao amin'ny faritry ny Oniversite. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Fanairana ny fahatongavan-tsaina anatinà famoretana
Ny 31 Oktobra lasa teo, 56 ireo mafàna fo tao an-tanànan'i Bacolod, Negros no voasambotra ary 2 tao amin'ny tanànan'i Manila nandritry ny bemidina nataon'ireo hery misahana ny filaminana nalefan'i Duterte tany amin'ireo biraon'ny fikambanan'ny olona araka ny lalàna sy ny tranon'ireo mafàna fo tao Negros ary ny renivohitry ny firenena.
Narahina bemidina iray natao tamin'ny vao mangirandratsin'ny 5 Novambra tany amin'ny biraon'ilay vondrona mafana fo Bayan tao Tondo, Manila sy ny fandrahonana ny hisian'ny valifaty ho ataon'ny fanjakana amin'ireo birao mpanoro hevitra araka ny lalàna an'ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ireo liam-pandrosoana izany.
Tsy nijanona ny famoretana ireo mpikatroka mafàna fo izay tena mpitsikera ny fitondrana Duterte, miaraka amin'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona sy antokom-pivavahana isan-karazany tafiditra ao anatin'ny lisitry ny miaramila ho “vondrona kaominista mpampihorohoro ”.
Raha toa ka mihamafy hatrany ny famehezan'ny fitondrana ankehitriny ireo habaka demokratika ao amin'ny firenena, ilay taranja PS 21 vaovao kosa manantena ny ho sehatra iray fanairana ny “fahatongavan-tsain” ‘ny taranaka Filipina aty aoriana ny amin'ny maha-zava-dehibe ny zon'olombelona, ny rariny ara-tsosialy ary ny fitohizan'ny tolona ho an'ny tena fahalalahana sy ny demokrasia.
Miezaka mampiditra io taranja io any amin'ireo faritra misy azy avy ireo Fakiolte hafa amin'ny Oniversite ao Filipina ivelan'ny Diliman. Manantena araka izany ireo mpanohana fa ho atosika hatrany ny ezaka toy izany any amin'ireo sekoly sy Oniversite hafa ao amin'ny firenena.
Ampamoaka : Mampianatra ao amin'ny Departemantan'ny literatiora misahana ny fampianarana ny Literatiora Filipiana sy momba an'i Filipina ao amin'ny UP Diliman ny mpanoratra ity lahatsoratra ity.
Azia Atsimo 3 andro izay